Yadannoo guyyaa FDG fi Ibsa ejjennoo Konyaa ABO Kaaba Jarmanii
Nuti miseensonni ABO Konyaa Kaaba Jarmanii waggaa 1ffaa Sadasa 9 bara 2005 guyyaa itti FDG golee afran Oromiyaa keessatti haala qindawominan egalee waggaa tokkoof osoo wali irraa hin citin itti fufee jiru haala midhagaan Sadasa 11. bara 2006 magalaa Hannover irra itti kabajaneera. Sagantaa yaadannoo kana irratti miseensonni konyaa deggersa mallaqaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolu buusii miseensummaa osoo hin dabalatiin tokkoo tokkoon isaanii Euroo 50 (shantama) gumaachaniiru.
Injjifannoolee seena qabeessa gootonni ummata Oromoo sagantaa qabsoo FDG keessatti galmeessaa jiran diinota qabsoo bilisummaa waan baayyee rifasiseef kan qabani fi kan gadidhisan wallaalun akka saree maraatuu godhachaa jiru. Galmee boonsaan ummata keenyaa hamilee qabsoof qabnu daran kakaseera, cimseeras.
Qabsoo bilisummaa Oromoo hooggana ABO jalatti geggefamaa jiru daran milkoomsuf yeroo darban caalaa itti dirqama keenya ba´uf jabinaan qabsoo bilisummaa ni fininsina.
Gootota fi sabboontota Oromoo qabsoo bilisummaa saba Oromoo galmaan ga´uf qe´ee dhaloota isaanii keessatti, mana hidhaa keessatti , mana barnootaa keessatti, karaa irratti, iddoo hojiitti fi dirree irratti wareegaman yookin qaama hirrattan yeroo hundaa ni yaadana.
Qbsoo saba Oromoo dhiga qabsaawotaan geggefamaa jiru hammaa galma ga´utti dirqama seenaan nu irraa eegatu ba´uf qophee dha.
Hamma dhadannoon, “Gadaan gadaa bilisumaati!” jedhu dhugoomutti “Qabsaawaan ni kufa garuu qabsoon itti fufa,” akka jedhamu, yaa ummata Oromoo biyya yookin biyya ambaa jirannuu haa jabannu, waliin qabsoo daran haa jabeessinu.
Miseensota Konyaa ABO Kaaba Jarmanii
Sadasa 12. bara 2006